Apple manamarina ireo ambaratonga telo mahatonga ny Apple TV 4K vaovao vidiny € 199 | Avy amin'ny mac aho
La Apple TV 4K vaovao Natolotr'i Apple ary efa misy izao hitehirizana amin'ny vidiny 199 euro, voatsikera izany marobe. Tsy noho ny vidiny ihany fa noho ny toetrany tsy afaka manamarina ny fiakaran'ny vidiny. Na izany aza, amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny CNN Tim Twerdahl, dia manome toky fa ny vidiny dia mihoatra ny rariny ary mifototra amin'ny ambaratonga telo manan-danja.
Tim Twerdahl, mpanantanteraka marketing an'i Apple (marketing, mitandrema amin'izany satria tena zava-dehibe amin'ny zavatra rehetra manaraka), nohamarinina ny vidin'ny Apple TV 4K vaovao miorina amin'ny lafin-javatra telo na rehefa mamaritra azy izy, ambaratonga telo. Nolazainy fa ny fitaovana vaovao dia manana fika manokana izay manome ny traikefa tsara indrindra azo atao. Izy io dia misy atiny tadiavin'ny olona ary ampiarahina tsara amin'ny vokatra Apple hafa.
Ho an'ireo toetra telo ireo dia nanamarina ity manam-pahaizana momba ny Marketing ity fa ny Apple TV dia manana vidiny fanombohana 199 euro miaraka amin'ny 32 GB ary 219 amin'ny 64GB. Ankoatr'izay dia nilaza i Twerdahl fa ny fomba fiasa Apple amin'ny lalao Apple Arcade, dia midika hoe manome lanja lehibe. Niaiky izy izao fa ny Apple TV 4K vaovao dia tsy natao hifaninana mivantana amin'ireo console toy ny Xbox na PlayStation.
Ny fifantohanay amin'ny lalao dia tato ho ato izay momba ny fialamboly, satria heverinay fa sanda lehibe ho an'ny mpanjifa izany, misy atiny marobe ao. Ary nanao zavatra betsaka izahay mba hampivoarana an'io traikefa io. Ny tena manamarika azy dia mety manohana ireo rehetra mifehy lalao isan-karazany ireo. Mety tsy noforonina izy io hifaninana mivantana amin'ny XBox sy PlayStation an'izao tontolo izao. Mitondra zavatra eny an-tsena izy ireo izay heveriko fa tsy manam-paharoa sy mahafinaritra ho an'ireo mpilalao sarimihetsika mafy.
Manomboka izao dia anao ny fanapahan-kevitra. Tsy afaka milaza aminao aho raha mitombina ny vidiny satria mbola tsy nanandrana aho. Manana Apple TV aho ary afaka milaza aminao aho fa tena traikefa tena tsara izany, saingy ny vidin'ity fitaovana vaovao ity dia avo loatra ho an'ny paosiko sy amin'izay azoko atao mifandraika amin'izay efa ananako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple dia manamarina ireo ambaratonga telo mahatonga ny Apple TV 4K vaovao vidiny € 199